Iftiinka ayaa ifaya, World Church of God Switzerland (WKG)
Xilliga qaboobaha waxaan aragnaa sida ay goor hore u madowdahay habeenkuna uu sii dheeraado. Mugdigu waa astaan ​​u ah dhacdooyinka adduunka mugdiga ah, mugdiga ruuxiga ah ama sharkaba.
Habeenkii adhijirrada ayaa adhigoodii daajin jiray bannaanka u dhow Beytlaxam markay si lama filaan ah hareerahooda ku wareegsan yihiin iftiin weyn. oo aad bay u baqeen » (Luukos 2,9).
Wuxuu ka hadlay farxad weyn oo ku imaan doonta iyaga iyo dadka oo dhan, "waayo maanta waa Badbaadiyehii dhashay Masiixa". Adhijirradiina halkaas bay tageen, oo waxay arkeen Maryan iyo Yuusuf, oo ilmuhu yar yar oo maro ku duudduuban, oo ammaanaya oo Ilaah ammaanaya, oo waxay naadiyeen wixii ay maqleen oo ay arkeen.
Tani waa farxadda weyn ee malaa'igta ay ku dhawaaqday adhijirrada, dadka fudfudud ee duurka ku jooga. Kuwaasi waxay injiilka ku faafiyeen meel kasta. Laakiin sheekada ballanqaadku wali ma dhammaan.
Markii Ciise markii dambe la hadlay dadka, wuxuu ku yidhi: - Anigu waxaan ahay nuurka dunida. Kii i soo raacaa, gudcurka kuma socon doono, wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha. (Yooxanaa 8,12).
Sheekada abuurista, erayga Kitaabka Quduuska ah wuxuu kuu muujinayaa in Abuuraha abuuray iftiinka iyo gudcurka. Sidaa daraadeed, waa inaanay kugu yaabin, laakiin waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inuu Ciise qudhiisu yahay iftiinka kaa soocay mugdiga. Haddaad raacdo Ciise oo aad ereykiisa rumeyso, kuma aad socotid gudcurka ruuxiga ah, laakiin waxaad leedahay iftiinka nolosha. Si kale haddii loo dhigo, haddii nalka nolosha uu kugu dhex jiro, waxaad tahay mid lala socdo ciise isla markaana ciise uu kugu iftiiminayo. Sida aabbuhu ula mid yahay Ciise, sidoo kale isaga ayaa la jooga isaga.
Ciise wuxuu ku siinayaa amar cad: «Waxaad tahay nuurka dunida. Markaa iftiinkaaga dadka hortiisa ha iftiimo, si ay u arkaan shuqulladaada wanaagsan oo ay u ammaanaan Aabbihiinna jannada ku jira » (Matayos 5,14 iyo 16).
Hadduu Ciise kugu dhex jiro, wuxuu kuu iftiiminayaa dadka kale. Sida iftiin ifaya, wuxuu u ifaayaa gudcurka adduunkan wuxuuna ka farxiyaa qof kasta oo soo jiita iftiinka runta ah.
Waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad u ogolaato in iftiinkaaga dhalaalayo sanadka cusub.